Umthandazo weJabes Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ngeli xesha uzifumana ukwimeko ebangela ukuba ube lusizi, simema wena ukuba wazi i Umthandazo weJabesNgokwenza lo mthandazo ngokholo olukhulu, uya kufunda indlela yokucela ukukhuselwa nguThixo kunye namandla owadingayo ukuphucula imeko.
1 Ungawufumana phi uMthandazo weJabes?
1.1 Wayengubani uJabesi?
2 Yintoni ebuzwe nguJabes kwesi sivakalisi?
Ungawufumana phi uMthandazo weJabes?
Umthandazo waseJabesh uvela eBhayibhileni kwi-1 yeziKronike isahluko 4 iivesi 9 ukuya ku-10:
"Kwaye uYabheshe wayebalasele kunabantakwabo, awathi umama wakhe wambiza ngokuba nguYabheshe, esithi: Kuba ndimzalele kabuhlungu."
Kwesi sahluko siboniswa indlela uJabes abuze ngayo kuThixo, esebenzisa umthandazo omncinci kodwa onamandla ofundeka ngolu hlobo:
"Kwaye uYabheshe wabiza uTHIXO kaSirayeli, esithi," Owu, ukuba ungandinika intsikelelo, wandise umda wam, kwaye ukuba isandla sakho besikunye nam, undihlangule ebubini, ukuze bungandenzakalisi. "
UJabes wafumana impendulo kwaye uThixo wamnika oko wayekucelile, iJabes yeviwa.
Phantse akukho kwaziwa malunga neJabes. Kuthiwa wayeyinzala yesizwe seengonyama ezathi kamva zafakwa kwisizwe sakwaYuda, ekuthiwa wayengenguye owabantu bakaThixo. Kukwakhankanywe ukuba wayeyindoda ebekekileyo, umama wakhe wamthiya igama ngenxa yobunzima bokuzalwa komntwana awayejamelene naye, iJabes kuthetha ukuba "kubuhlungu" okanye "umdali wosizi", nangona ngamanye amaxesha kuguqulelwa ngokuthi "wazala unentlungu enkulu."
Kuthiwa umama wayefuna ukukhumbula iintlungu zokubeleka ngegama lonyana wakhe ngezizathu ezahlukeneyo: Ukukhunjuzwa ukuba ubulele kuba, ngaphandle kwentlungu, wasikelelwa ngobomi bonyana wakhe kwaye noJabes baqonde Zincame ngenxa yokuba kwakufuneka umama wakhe adlule kuye, ukuze amhlonele kwaye amnqule ngokufanelekileyo kwaye anikezele ngobomi bakhe ukubuyekeza lowo wayemnike isipho sobomi ngomzamo omkhulu kunye nokubandezeleka.
Yintoni ebuzwe nguJabes kwesi sivakalisi?
Kumthandazo awenzayo, uJabes ucela uThixo ukuba amkhusele kwaye amsikelele, ebongoza iNkosi ukuba imgcine kwizigwebo ezimbi igama lakhe elihlala limkhumbuza ngalo. Kuthethwa ngabantu abaninzi ukuba iJabes icela izinto ezine ezibalulekileyo: Eyokuqala kukuba uThixo amnike intsikelelo yakhe.
Ngenxa yokuba eqonda ukuba uThixo kaSirayeli ungokuphela kwakhe oyinyaniso, uyamcela ukuba amgqume ngobabalo. Nangona kuqikelelwa ukuba le nxalenye yesicelo sakhe yaxutywa kwisithembiso esenziwa nguThixo ukukhusela uAbraham kunye nenzala yakhe, ebonakala kwiGenesis isahluko 22 ivesi 17.
Isicelo sesibini sokuba ubomi bakhe buphumelele kwaye boyise kwaye intlawulo yemizamo yakhe iphindaphindwe. Okwesithathu yayikukuba isandla seNkosi uThixo sasolulwe saya kuye nokuba amandla nesidima sakhe sasihamba naye yonke imihla.
Eyesine neyokugqibela yayikukhuselwa. Oku kubonisa ukuzithemba kukaJabes ekubeni uThixo uya kuba ngumsindisi wakhe kunye nomkhuseli wakhe kwaye nesicelo sakhe siza kuviwa, uJabes wayefuna ukuba uThixo amvumele ubomi obupheleleyo, ngaphandle kokubandezeleka kwaye, kulwazi lwamva nje olukhoyo ngaye, uThixo Uthobele isicelo sakho.
Kuyatshiwo ukuba ulonwabo, impumelelo kunye noxolo olwalonwabelwa nguJabes emva kwesicelo sakhe kwamenza walibala konke ukubandezeleka awayekuyo ekuqaleni kobomi bakhe. Umthandazo kaJabes usibonisa indlela ekubaluleke ngayo ukwenza umthandazo ube yinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, kuba singabakhonzi beNkosi. Kufuneka sikholelwe ukuba uyakuyiphendula imithandazo yethu nokuba ikweyiphi imeko esikuyo, kuba unenceba kwimiphefumlo yethu.
IJabes ngowona mzekelo mkhulu wendlela esimele ukusondela ngayo kuThixo wethu, sithobile intloko, ngelizwi eliphantsi, ngokuthobeka nothando. Ukulunga kwakho kunye nokwazi ukuba yinxalenye yento eyenza umthandazo wakho ube namandla.
Abantu abaninzi bayawutolika umthandazo wakhe ngokungathi unike uThixo amandla okuthatha isigqibo sokuba angathanda ukumnika ntoni, ngaphandle komnqweno wakhe, akaze abuze eNkosini ukuba isombulule zonke iingxaki zakhe, kodwa endaweni yokuba amkhusele kwaye amgcine kububi obo butyhafisayo. Umhlaba. Ukuhamba ngaphandle kokuzenzakalisa kwaye unokuhlala uzolile kwaye ugcwele ngaphandle kokukhathazeka ngokwenzakala.
Ngokwesiqhelo xa sithandaza eNkosini, siyayicela amandla okusimela thina nabanye, ukuze sijongane nendlela enzima, kodwa eJabes kwakungekho njalo. Wacela ukuba akhathalelwe ebubini, ukuba iNkosi imnike isandla sakhe ukuba ahambe emhlabeni ngaphandle kokulimala.
Ekugqibeleni, wakhula ngendlela angazange acinge ngayo. Ngokuvula intliziyo yakhe eNkosini, wakwazi ukusombulula iingxabano zakhe, waphumelela kwiiprojekthi kunye nezifundo zakhe, (yayilisiko lamaJuda ukuba wayengugqirha). Yiyo loo nto etsala abafundi abaliqela abanemincili ukuba bakhokelwe yindlela efanayo yokunyaniseka kunye nobulumko awayehamba ngabo.
Umthandazo kaJabhetsezi, nangona kunjalo, uvula iingcango zembono eyahlukileyo ngemithandazo. Sihlala sicela intlalontle kunye nolonwabo lwabanye abantu, kuba iNkosi iyabaxhasa kwaye ibakhokele abo basondeleyo kunye nabo sibathandayo, kuba uyabakhusela. Kodwa imithandazo ayisiyiyo kwaphela, imithandazo ingangaphezulu kwaye yile nto lo mthandazo uyibeka phambi kwethu.
Imithandazo inokuba yeyokuzingca, sinokukwazi ukuzibuza amaxesha ngamaxesha; Yile nto yenziwe nguJabes. Kwaye wavuzwa kuba uThixo wayebona ukuba unyanisekile entliziyweni yakhe.
UThixo uyimfuneko ukuthatha amanyathelo amakhulu, ezo ziya kuchaza ikamva lethu, ezo ziya kutshintsha ubomi bethu. INkosi yethu yenzela uJabhezi imimangaliso kwaye inakho ukusenzela imimangaliso, ukuba sithembekile kwaye siyazithoba kwintando yakhe.
Amadoda amaninzi ekuthethwa ngawo eBhayibhileni ayemiselwe ukuba aphile kabuhlungu okanye abe buhlungu. IJabes, uMoses, David kunye noPeter. Kodwa ukuba iNkosi isibonakalisile into, kukuba iyakwazi ukudala yonke into ngaphandle kwento. Waphakamisa la madoda ngobukhulu ngamandla akhe nothando kwaye emva koko, la madoda adala umhlaba omtsha, esihamba kuwo ngoku.
Kukho inkcukacha edla ngokungaqapheleki kumthandazo kaJabesi kwaye eli binzana lilandelayo: "Kwaye iJabesi ibibalasele kunabantakwabo", ukusuka koku kungatolikwa njengokuthi uThixo ukhetha iJabesi kunabanye, ukuba yiNkosi ayigqibileyo ukumkhusela ngaphezu kwamanye amatakane, ingcaciso engeyiyo, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ukucela uThixo ukuba asithande akusenzi ukuba sizikhukhumeze okanye sizicingele, sifuna ukuba iNkosi isisikelele ngamandla okwenza okuhle kwindlela ayenzileyo.